UMncwango uthi khumu ekuholeni iDA eKZN
UMHOLI weDA KwaZulu-Natal uMnuz Zwakele Mncwango uthi ngeke awungenele umbango wokuhola iqembu kulesi sifundazwe Isithombe: Sibonelo Ngcobo
UMHOLI weDA KwaZulu-Natal uMnuz Zwakele Mncwango, uzothi khumu ekuholeni iqembu esifundazweni.
UMncwango uveze ukuthi ngeke alungenele ukhetho kwingqungquthela yesifundazwe ezoba ngonyaka ozayo lapho kuzokhethwa khona ubuholi obusha.
Nakuba uMncwango ekuqinisekisile ukuthi kunenqwaba yamalungu eDA abemnxenxa ukuba angenele umjaho wesisodwa sezikhundla engqungqutheleni yaleli qembu kazwelonke ezobanjwa ngo-Okthoba kodwa uthe ngeke alifake igama lakhe esigqokweni uma sekuhlala ingqungquthela.
UMncwango usehole iqembu KwaZulu-Natal amahlandla amabili njengoba aqokelwa okokuqala kulesi sikhundla ngo-2015, waphinde wakhethwa kwingqungquthela yesifundazwe yango-2018.
Engxoxweni neSolezwe, uMncwango uthe sesifikile isikhathi sokuthi adede inkundla ekubeni ngumholi eKZN.
“Ukuhola kufana nokugijima umjaho. Ufike ugijime elakho ibanga, bese kufika isikhathi lapho kufanele udlulisele khona induku kwabanye. Mina sengiyikhathulile eyami indima. Manje sekuyisikhathi sokuthi kungene abaholi abasha. Uma ungumholi kubalulekile ukuthi uphume abantu besakuthanda. Njengamanje baningi abanginxenxayo ukuthi ngihlale kodwa angifuni ukuthi ngize ngiphume esikhundleni ngoba kungasekuhle.”
Uthe; "Lokhu kuyisifundo nakwabanye abaholi ukuthi bangahlali isikhathi eside. Uthole uma sekungena umholi omusha, sekunoqhekeko ngoba akezwani nalona okade engafuni ukuphuma esikhundleni.”
UMncwango uthe usezogxila ekubhaleni incwadi emayelana nempilo yakhe nepolitiki aphinde aqhube izifundo zePhD.
“Ukuhola iqembu esifundazweni kudinga isikhathi ngoba miningi imihlangano okumele uyihlale. Uma ngingeseyena umholi ngizothola nesikhathi sokwenza izinto zami.”
UMncwango uthe okumjabulisayo wukuthi ukwazile ukuveza izifiso abenazo kula mahlandla amabili ehola leli qembu kulesi sifundazwe.
“Ngehlandla lokuqala ngangithe ngifuna ukukhulisa iqembu ezindaweni zasemakhaya. Lokho kwenzekile ngokhetho lohulumeni basekhaya ngo-2016, lapho sabona iDA iba namakhansela ezindaweni zasemakhaya ezifana noMkhanyakude noZululand. Bekungokokuqala ukuthi iDA ibe namakhansela kulezi zindawo. Ngokhetho lukazwelonke (2019) ngangithe ngifuna ukukhulisa isibalo sezihlalo zeDA esiShayamthetho saKwaZulu-Natal. Lokho sikwazile ukukwenza,” kusho uMncwango.
Okhethweni lwangonyaka owedlule leli qembu lakwazi ukukhuphula isibalo samalungu alo ngesihlalo esisodwa, njengoba selinezihlalo ezingu-11 esiShayamthetho saseKZN.
UMncwango uthe ngeke angenele umjaho wokuthatha esinye sezikhundla ebuholini bukazwelonke uma leli qembu selikhetha abaholi abasha kwingqungquthela ezoba ngo-Okthoba.
Imithombo ithi nakuba bekungakavunyelwana kodwa zikhona izingxoxo zokuthi uMncwango aphakanyiselwe esikhundleni sokuba yiPhini likaSihlalo engqungqutheleni kazwelonke.
“Baningi asebeke bakhuluma nami bengicela ukuba ngivume ukungenela ukhetho kodwa nganqaba,” kusho uMncwango.